साझापोष्ट टिप्पणी/काठमाडौं, १९ चैत । अमेरिकामा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या चीनको भन्दा धेरै पुगेको छ । ४०५५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चीनमा ३३१२ जनाको मात्र मृत्यू भएको तथ्यांक बाहिरिएको छ । यो तथ्यांकमा इटली- १२४२८ र स्पेन- ८४६४ पलिहो र दोस्रो स्थानमा छन् । अमेरिका तेस्रो स्थानमा छ ।
कोरोना संक्रमितको संख्यामा अमेरिका विगत एक हप्तादेखि सबैभन्दा उच्च छ । संक्रमितको संख्या १,८८, ५७८ पुगेको पछिल्लो तथ्यांक छ । दोस्रो स्थानमा रहेको इटालीमा संक्रमित संख्या १,०५,७९२ छ । पछिल्लो २४ घण्टाभित्र ८७४ जनाको मृत्य भएको छ भने २५,११७ नयाँ संक्रमित पहिचान भएका छन् । अमेरिकामा अहिलेसम्म ७२५१ जना मात्र निको भएका छन् भने १७७,२८६ बिमारी अवस्थामा नै छन् । यो प्रवृति कायम रहेमा आउने एक हप्ताभित्र मृतकको सूचीमा अमेरिका सबैभन्दा माथि हुने छ ।
यस्तो किन भयो ? कहाँकहाँ नेर चुक्यो अमेरिका ? विश्वको एकछत्त शक्ति राष्ट्र कोरोना सामु किन यति कमजोर भयो ? विश्लेषकहरुले अमेरिकाका ७ गल्तीहरु औल्याएका छन् ।
१. कोरोना अमेरिका प्रवेश गर्दछ भन्ने विश्वास नहुनु
शुरुवातमा अमेरिकी प्रशासनले कोरोनालाई कम आँक्यो । उसले विगतका सार्स, मार्स र इबोलाजस्तै कुनै क्षेत्रमा मात्र हुने भाइरसको रुपमा बुझ्यो । कोरोना चीनको स्थानीय रोग होला भन्ने ठान्यो । चीनसँगको व्यापार युद्ध र राजनीतिक प्रतिस्प्रर्धाका कारण चीन सरकारसँग राम्ररी सूचना लिने र विश्लेषण गर्ने काम गरेन । अमेरिका चीनलाई खुच्चिङ गर्न तिर लाग्यो ।
ट्रम्प प्रशासनको मात्र हैन, अधिकांश अमेरिकीमा कोरोना अमेरिका प्रवेश गर्दछ भन्ने कल्पनासम्म थिएन । उनीहरुले त्यसलाई दूरदेशको कथा ठानेका थिए । चीनजस्तो एक शक्तिशाली देशले त्यसलाई विश्वमा फैलिनु अगाडि नै नियन्त्रण गर्ला भन्ने बुझाई र विश्वास थियो ।
२. कोरोनाको चाइना कनेक्सनमा मात्र ध्यान दिनु
२० जनवारीदेखि कोरोना अमेरिकामा देखियो । त्यसपछि अमेरिकी प्रशासन थोरै झस्कियो । तर अझै उनीहरुले योे भाइरसको विशेषता ठीक ढंगले बुझेनन् । उनीहरुले यो भाइरस चीनमा हुन्छ । तसर्थ, चीनबाट आउनेहरुलाई मात्र निगरानी गर्दा हुन्छ भन्ने धारणा राखे । उनीहरु अमेरिकाको चीन कनेक्सन टुटाउनतिर लागे । तर रोग विश्वका अरु धेरै देशमा पुगिसकेको थियो । चिनियाँ यात्रीको निगरानीले मात्र संक्रमण रोकिने सम्भावनाभन्दा स्थिति बाहिर पुगिसकेको थियो ।
३. संक्रमितहरुको सम्पर्कवृत्तमा ध्यान नदिनु
जनवरी २९ मा ट्रम्पले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्‍यो । स्पेशल टास्क फोर्स बनायो । तर कोरोना जाँच भने विदेशीहरुमा मात्र सीमित गर्‍यो । विदेशीहरुको सम्पर्कमा आएका अमेरिकीहरुको स्वास्थ्य जाँच गरिएन । संक्रमितहरुको सम्पर्क घेराबारेमा ध्यान पुगेन ।
४. जाँचको सीमालाई फराकिलो नपार्नु
अमेरिकी जनस्वास्थ्य प्रशासनले स्वास्थ्य संकटकालपछि पनि कोरोना जाँचको घेरालाई फराकिलो पारेन । सम्पर्कमा आएका बिमारीहरुको मात्र जाँच गरियो ।
५.व्यवस्थापकीय कार्यमा समय छँदै ध्यान नदिनु
अमेरिकी सरकार सामान्य जनस्वास्थ्य प्रशासन र तयारीमा भर पर्‍यो । कोरोना महामारीका लागि थप तयारी गरेन । विस्तारै अस्पतालहरुमा मास्क, पिपिई, सेनिटाइजर, औषधि आदिको अभाव हुन थाल्यो विशेषतः न्यूयोर्कमा यस्ता अभाव चर्को देखियो ।
६. लकडाउन नगर्नु
ट्रम्पले लकडाउनको मोडेल नै अस्वीकार गरे । उनले अमेरिका बन्द हुन नबनेको देश भने । बन्द नगरिकनै कोरोना सामना गर्ने नीति लिए । त्यसले गर्दा संक्रमण धेरै छिटो फैलियो ।
७. विवेकपूर्ण राष्ट्रिय नेतृत्वको अभाव हुनु
ट्रम्पको स्वभाव र समयमै विवकपूर्ण निर्णय लिन सक्ने क्षमता नहुनुलाई पनि कमजोरीका रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।